Akụkọ - CHKBiotech rụpụtara ngwa nyocha ọhụụ maka ọdịiche dị iche iche nke coronavirus
CHKBiotech rụpụtara ngwa nyocha maka ụdị ọdịiche coronavirus ọhụrụ
New Coronavirus Variant Strain 501Y-V2 nke South Africa
Ka ọnwa nke iri na asatọ dị na mkpụrụ ụbọchị iri na asatọ n’afọ 2020, mba Saụt Afrịka chọpụtara 501Y-V2 mutant nke coronavirus ọhụrụ a. Ugbu a, mmụba South Africa agbasawo ihe karịrị mba 20. Nlere egosiwo na n'elu New Corona-virus Mutants nwere ike iburu ndị ọzọ dị iche iche nke New Coronavirus nke mgbanwe K417N / T, E484K na N501Y nke nwere ike belata ikike nkwụsị nke ọgwụ plasma na-egbochi ọgwụ mgbochi. Otú ọ dị, e jiri ya tụnyere mkpụrụ ndụ ihe nketa mkpụrụ ndụ Wuh01 (usoro nọmba MN908947), 501Y.V2 nke usoro mgbanwe mkpụrụ ndụ South Africa mutant nwere 23 nucleotide iche. Ọ nwere otu ngbanwe N501Y dị ka ụdị mbugharị Britain B.1.1.7, mana ọ ka nwere mmụba na saịtị abụọ bụ isi E484K na K417N nke protein protein nke nwere mmetụta dị mkpa na ikike nke nje ahụ ibute ọrịa.
New Coronavirus bụ Virus RNA na-adọ otu, nke mgbanwe Genome na-adịkarị. Nchọpụta ebumnuche nwere ike ibute nchoputa nchoputa nke ihe nlele na obere nje virus na ụdị nje virus. Ọnụego nyochaghachi na otu ihe dị mma na nchọpụta ahụ, nwere ike iru karịa 10%, nke nwere ike ịbawanye oke ọrụ ma mee ka oge nyocha ahụ dịkwuo ogologo. Nchọpụta ọtụtụ-nyocha na nkwenye ibe nke nsonaazụ nke ebumnuche ọ bụla nwere ike ime ka ọnụego nchọpụta ahụ dịkwuo mfe ma kwado nchoputa mbụ.
Ọgụgụ 1. Schematic osise nke New Coronavirus ofufe ọrịa usoro
New Coronavirus Mutant B.1.1.7 nke Britain
Na December 26th, 2020, akwụkwọ sayensị mbụ nke B.1.1.7 Strain bipụtara na ntanetị. Institute of Hygiene University of London UK and Tropical Diseases, kwadoro na B.1.1.7 Nje nwere ike ịgbasa karịa nsogbu ndị ọzọ, nke karịrị 56% (95% CI 50-74%). N'ihi na ụdị nje mutant ọhụrụ a nwere ike izipụ nke ọma, ọ na - esiri ya ike ijikwa COVID-19. N’echi ya, Mahadum Birmingham dị na United Kingdom bugoro akụkọ na MedRxiv. Nnyocha ahụ chọpụtara na ọnụ ọgụgụ nke mkpụrụ ndụ ORF1ab na N na-ebute mkpụrụ ndụ ihe nketa na ndị ọrịa bu nje nje B.1.1.7 (S-gene dropout) mụbara nke ukwuu; a na-enyocha ihe ịtụle a n'ọnụ ọgụgụ ndị bi na ya. Edemede a rụtụrụ aka na ndị ọrịa bu nje B.1.1.7 nke Britain nwere oke ibu ibu ibu, yabụ mutant a nwekwara ike bụrụ ihe na-akpata ọrịa.
Ọgụgụ 2. Usoro mkpụrụ ndụ genome nke dị na coronavirus mutant nje B.1.1.7 nke Britain
Onyonyo 3. Mgbanwe nke N501Y mere na mba Britain na South Africa Ndị iche iche
Nchọpụta Nchọpụta nke New Coronavirus Variants
Chuangkun Biotech Inc. emeela nke ọma ịhe nchọpụta ngwa ngwa maka ọdịiche dị iche iche nke B.1.1.7 na 501Y-V2.
Uru nke ngwaahịa a: oke uche ， nchọpụta nke 4 lekwasịrị anya, na-ekpuchi saịtị mmụba isi nke nje nje mutanụ B.1.1.7 na 501Y.V2 South Africa mutant nje. Ihe omuma a nwere ike ichota N501Y, HV69-70del, E484K saịtị ndi mmadu na coronavirus S gene ohuru; Nnwale ngwa ngwa: ọ na - ewe naanị 1 awa 30 nkeji site na nchịkọta nchịkọta iji rụpụta.
Ọgụgụ 4. Nchọpụta nke COVID-19 Britain Variant Amplification Curve
Onyonyo 5. Nchoputa nke COVID-19 South African Variant Amplification Curve
Ọgụgụ 6. Anụ-ụdị New coronavirus amplification usoro
O doro anya etu mgbanwe ndị a si na-achịkọta mmetụta ọhụrụ ogologo oge nke ọrịa a na-efe efe COVID-19. Mana nke a na-echetara anyị na mmụba ndị a nwere ike imetụta ịdị irè nke ọgụ na mgbochi nke ọgwụ mgbochi na-eweta. Ọ na-echetakwara anyị na anyị kwesịrị ịnọgide na-enyocha coronavirus ọhụrụ ahụ ogologo oge ma melite ọgwụ mgbochi COVID-19 iji mesoo mgbanwe nke coronavirus ọhụrụ.